कोरोनाले पनि ‘हेपेको’ नरैनापुर – sunpani.com
कोरोनाले पनि ‘हेपेको’ नरैनापुर
सुनपानी । ८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – वर्षौसम्म बघौडाको नामले चिनियो, बाँकेको नरैनापुर । विकासको दृष्टिले हेर्दा यसलाई ‘कर्णाली’ भनिन्थ्यो, अझै भनिन्छ ।
जिल्लाको दक्षिण पूर्वी यो पालिकामा न विजुली छ, न त राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य । हुलाकी सडकको देन भनौ, बाटोसम्म राम्रो बन्दैछ । नेपालगञ्जदेखि ४४ किलोमिटर (अन्तिम बिन्दु) मा ६ वटा गाविस मिलेर बनेको यो पालिका सधैंको उपेक्षित थियो भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपालगञ्जमा आइपुग्ने केन्द्रका ठूला नेता हुन् वा जिल्लाकै नेता, उनीहरुले विकासमा पछि परेको र अब उठाउनु पर्छ भनेर नाम लिने यही पालिकाको हो । सधैं विकासमा पछि परेको भनेर सम्बोधन हुने नरैनापुर यतिबेला कोरोनाको ‘हटस्पट’ भनेर चर्चामा आएको छ ।
कोरोनाले पनि अभाव, पिछडिएको ठाउँमा आक्रमण गरेको छ । जहाँका बिरामीलाई उपचार गर्ने राम्रो व्यवस्था छैन, त्यही कोरोनाको हटस्पट बनेको छ । बुधबारको पाँचसहित ७३ जना संक्रमित देखा परिसकेको छ । एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
शिक्षामा धेरै पछाडी रहेको नरैनापुरका अधिकांश युवा रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न शहरमा पुग्छन् । अहिले विश्वमै आतंक मच्चाएको कोरोनाका कारण उद्योग, कलकारखाना बन्द भएपछि उनीहरु कयौं दिन भोकै, प्यासै हिडेर गाउँसम्म आइपुगे । तर, दुर्भाग्य मान्छेसँगै कोरोना आइपुग्यो ।
नौ दिनदेखि वडा नं. ६ को जयकिसन माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका १८ वर्षीय रामकृष्ण मौर्य मुम्बईबाट धेरै हण्डर खाएर गाउँसम्म पुगेका थिए । घर फर्किदा पाएको पीडाले गर्दा बोल्दा पनि भक्कानिएका मौर्यले भन्नुभयो, ‘मुम्बईबाट आउदा ६ दिनसम्म ट्रकमा कोचियौ । धेरै अनुनय बिनय गर्दै उत्तर प्रदेशको लखनऊ आयौ । लखनऊबाट ६ दिन पैदल हिडेर नरैनापुरको सीमानामा आइपुगे । राती नाकाबाट छिरे । घरपरिवारकै सल्लाहमा क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको छु ।’
भारतको महाराष्ट्र पुगेका १३ बर्षीय अख्तर रज्जाक एक्लै नेपाल फर्किएका थिए । नरैनापुर गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा मदरसा अरबीया गुल्सने वारीश हुर्मतुलमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा ४३ जनासँगै बसिरहेका छन् । उनको पीडा पनि दर्दनाक छ ।
यी गाउँ फर्किएकामात्रै होइन, अझै भारतमै बेरोजगार भएर बसेकाहरु कसरी घर फर्किने होला भन्ने चिन्तामा छन् । नरैनापुर ६ की भावना गिरीले गोवाको होटलमा काम गर्ने श्रीमान बेरोजगार भएर बसिरहेकाले घर फर्किन नसकेको बताउनुभयो ।
सात सय बढी अझै क्वारेन्टाइनमा छन् । उनीहरुको धमाधम कोरोना परीक्षण भइरहेको छ । दिन दिनैजसो कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । वर्षौदेखि हेपिएको नरैनापुरलाई कोरोनाले पनि हेपेको छ । गाउँको अवस्था डर लाग्दो छ । मान्छे देखेर मान्छे डराइरहेका छन् ।
१० दिन देखि क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका देवरलाई भेट्न पुगेकी किशोरी बर्माले भन्नुभयो, राती–राती भारतबाट आउँदै गाउँ छिर्ने धेरै छन्, हामी सबै डराएर बसिरहेका छौं ।’
गाउँपालिका भित्रका विभिन्न गाउँमा बसिरहेका स्थानीयवासीहरु त्रसित छन् । सडकमा सवारी साधन देख्दा घरभित्रैबाट चियाउने गर्छन् । केही मानिस आफ्ना पशुको घाँसपातका लागि बाध्यताले गर्दा बाहिर निस्किने गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिसमेत तनावमा छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष मो.इस्तियाक शाहले आफू केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । कोरोनाको कहरमा परेको नरैनापुरमा जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी डरत्रासमा छन् । स्थानीयवासी रामधन यादवले आफू कसरी कोरोनाबाट बच्ने भन्ने ध्यानमा रहेको बताउनुभयो ।
अझै ठूलो संख्यामा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिको रिपोर्ट आइसकेको छैन । उनीहरुको स्याम्पलसम्म लिइएको छ । आफ्नै आँखा अगाडि २५ वर्षीय युवाको ज्यान गएको देखेका र सुनेका उनीहरु आफ्नो रिपोर्ट के हुने हो भनेर गुम्सिएका छन् ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँकेका अधिकृत एवं कोरोनाका फोकलपर्सन नरेश श्रेष्ठले नरैनापुरको क्वारेन्टाइनमा रहेका जनाको छिटो भन्दा छिटो स्वाव लिएर परीक्षण गर्न लागि परेको जानकारी दिनुभयो ।
छिटो परीक्षण नहुँदा कोरोना संक्रमित र संक्रमित नभएकाहरु सराबरी बस्न बाध्य भएका छन् । यसले क्वारेन्टाइनमा बसेकामा मानसिक तनाव सिर्जना गरेको छ । बाँकेमा ९९ जना कोरोना संक्रमित पुग्दा नरैनापुरका ७३ जना छन् । (देशसञ्चार)